သင့်ခင်ပွန်း ဒီစကားတွေ မကြာခဏပြောလာရင် သင်တို့အိမ်ထောင်ရေးစိုးရိမ်ဖွယ်ရှိနေ - Myanmar Kid World သင့်ခင်ပွန်း ဒီစကားတွေ မကြာခဏပြောလာရင် သင်တို့အိမ်ထောင်ရေးစိုးရိမ်ဖွယ်ရှိနေ ~ Myanmar Kid World
သင့်ခင်ပွန်း ဒီစကားတွေ မကြာခဏပြောလာရင် သင်တို့အိမ်ထောင်ရေးစိုးရိမ်ဖွယ်ရှိနေ
11:52 PM အိမ်ထောင်သည်သိမှတ်ဖွယ်ရာ
သင်နဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်ကြား အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်ဆံမှုနဲ့ လေးစားမှု လျော့ပါးလာရင် အိပ်ထောင်ရေး စိုးရိမ်ရနိုင်ပါတယ်။ ကြာရှည်ခိုင်မြဲပြီး ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ဖို့အတွက် ပြောဆိုဆက်ဆံမှု၊ အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ ကတိတွေ စောင့်သိမ်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ခင်ပွန်း ဒီစကားတွေ မကြာခဏပြောဆိုနေပါက သင် ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာ သူနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုပါ။ သူ သင့်ခံစားချက်တွေနဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို လေးစားနားလည်မှုပေးသင့်ပါတယ်။
တခါတလေ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကနေ ကွဲထွက်တာက တမူထူး၍ နှစ်သက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ ပုံမှန်အချစ်ရေးဘဝနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုရနေသလားဆိုတာ မိမိကိုယ်ကိုယ်မေးကြည့်ပါ။ သူပျော်နေတယ်လို့ရော ယူဆလား။ မိမိတို့အချစ် ပိုခိုင်မြဲဖို့နဲ့ အချစ်ရေးကိစ္စမှာ စိတ်ခံစားချက်ပိုမိုအားကောင်းစေဖို့ ရံဖန်ရံခါ အချိန်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
၂။ "ငါပြောတာတွေ နင်ဘယ်တော့မှ သဘောမပေါက်ဘူး"
ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေးတို့ အမြင်ချင်းကွဲပြားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တခါတလေ စုံတွဲနှစ်ဦးကြား ဆက်ဆံမှု ရှုပ်ထွေးသွားတတ်ပါတယ်။ သူ မကြာခဏအထင်လွဲခံရကြောင်း ပြောနေပါက တစ်ယောက်စကား တစ်ယောက်သေချာနားထောင်ပြီး နားလည်မှုရယူပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းက ခိုင်မြဲတဲ့အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။
၃။ "နင်က …. နဲ့ တူကို မတူဘူး"
နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုမှုတွေက အချစ်ရေးဆက်ဆံမှုကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ သင်ခင်ပွန်း သင့်ကို သူ့အမေ၊ သူငယ်ချင်း၊ ညီမ သို့မဟုတ် တခြားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ တစ်ချိန်လုံး နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုနေပါက သူ သင့်ကို တကယ်တန်ဖိုးမထားတာပါ။ အခြေအနေကို သုံးသပ်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုရဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပါ။
၄။ "နင် ငါချစ်ခဲ့တုန်းကနဲ့ မတူတော့ဘူး"
နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းနဲ့ ဦးနှောက်ဥာဏ်ရည်ပိုင်းပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အမျိုးသားက ဒီစကားကို အလိုမကျပြောနေရင် သူဟာ သင်တို့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တုန်းက လူနဲ့မတူတော့တာ သူ့ကိုယ်သူ မသိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို အမြဲမပြောင်းမလဲ ရှိနေဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ဖို့အတွက် နှစ်ဦးလုံး အတူတကွ ကြီးပြင်းပြီး ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကျော်လွှားဖြတ်သန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သငျနဲ့ သငျ့လကျတှဲဖျောကွား အပွနျအလှနျပွောဆိုဆကျဆံမှုနဲ့ လေးစားမှု လြော့ပါးလာရငျ အိပျထောငျရေး စိုးရိမျရနိုငျပါတယျ။ ကွာရှညျခိုငျမွဲပွီး ကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့ အိမျထောငျရေးဖွဈဖို့အတှကျ ပွောဆိုဆကျဆံမှု၊ အပွနျအလှနျလေးစားမှုနဲ့ ကတိတှေ စောငျ့သိမျးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့ခငျပှနျး ဒီစကားတှေ မကွာခဏပွောဆိုနပေါက သငျ ဘယျလိုခံစားရလဲဆိုတာ သူနဲ့ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောဆိုပါ။ သူ သငျ့ခံစားခကျြတှနေဲ့ ထငျမွငျခကျြတှကေို လေးစားနားလညျမှုပေးသငျ့ပါတယျ။
တခါတလေ ပုံမှနျလုပျရိုးလုပျစဉျကနေ ကှဲထှကျတာက တမူထူး၍ နှဈသကျဖှယျရှိပါတယျ။ မိမိတို့ရဲ့ ပုံမှနျအခဈြရေးဘဝနဲ့ ပြျောရှငျမှုရနသေလားဆိုတာ မိမိကိုယျကိုယျမေးကွညျ့ပါ။ သူပြျောနတေယျလို့ရော ယူဆလား။ မိမိတို့အခဈြ ပိုခိုငျမွဲဖို့နဲ့ အခဈြရေးကိစ်စမှာ စိတျခံစားခကျြပိုမိုအားကောငျးစဖေို့ ရံဖနျရံခါ အခြိနျပေးဖို့ လိုပါတယျ။
၂။ "ငါပွောတာတှေ နငျဘယျတော့မှ သဘောမပေါကျဘူး"
ယောကျြားလေးနဲ့ မိနျးကလေးတို့ အမွငျခငျြးကှဲပွားပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ တခါတလေ စုံတှဲနှဈဦးကွား ဆကျဆံမှု ရှုပျထှေးသှားတတျပါတယျ။ သူ မကွာခဏအထငျလှဲခံရကွောငျး ပွောနပေါက တဈယောကျစကား တဈယောကျသခြောနားထောငျပွီး နားလညျမှုရယူပါ။ ဒီလိုလုပျခွငျးက ခိုငျမွဲတဲ့အိမျထောငျရေးတဈခုအတှကျ မဖွဈမနလေိုအပျပါတယျ။
၃။ "နငျက …. နဲ့ တူကို မတူဘူး"
နှိုငျးယှဉျပွောဆိုမှုတှကေ အခဈြရေးဆကျဆံမှုကို ပကျြစီးစပေါတယျ။ သငျခငျပှနျး သငျ့ကို သူ့အမေ၊ သူငယျခငျြး၊ ညီမ သို့မဟုတျ တခွားအမြိုးသမီးတှနေဲ့ တဈခြိနျလုံး နှိုငျးယှဉျပွောဆိုနပေါက သူ သငျ့ကို တကယျတနျဖိုးမထားတာပါ။ အခွအေနကေို သုံးသပျပွီး ပြျောရှငျမှုရဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံး ဆုံးဖွတျခကျြခမြှတျပါ။
၄။ "နငျ ငါခဈြခဲ့တုနျးကနဲ့ မတူတော့ဘူး"
နှဈတှကွောလာတာနဲ့အမြှ ရုပျပိုငျး၊ စိတျပိုငျးနဲ့ ဦးနှောကျဉာဏျရညျပိုငျးပွောငျးလဲမှုတှေ ဖွဈပျေါပါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့အမြိုးသားက ဒီစကားကို အလိုမကပြွောနရေငျ သူဟာ သငျတို့ခဈြကွိုကျခဲ့တုနျးက လူနဲ့မတူတော့တာ သူ့ကိုယျသူ မသိတာဖွဈပါတယျ။ ဘယျသူမဆို အမွဲမပွောငျးမလဲ ရှိနဖေို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
အောငျမွငျတဲ့ အိမျထောငျရေးဖွဈဖို့အတှကျ နှဈဦးလုံး အတူတကှ ကွီးပွငျးပွီး ပွောငျးလဲမှုတှကေို ကြျောလှားဖွတျသနျးရမှာ ဖွဈပါတယျ။